Ezemidlalo – SIVUBELAINTUTHUKO
MAGAYE CELE LOYO owabe engumqeqeshi weqembu lesizwe likanobhutshuzwayo laseNingizimu Afrika, uMnuz uShakes Mashaba uthi akaneme ngendaba yabadlali asebekhulile kakhulu ngokweminyaka abavele benze i-ABC Motsepe league indawo yabo yokugugela. UMashaba uthe leli yiphutha elikhulu elibonakala livunywa nje kalula yinhlangano eyengamele ibhola likanobhutshuzwayo eNingizimu Afrika, iSouth African Football Association (SAFA). UMashaba owazakhela igama elikhulu ngesikhathi enza ezibukwayo […]
UMSHAYISIBHAKELA WASENINGIZIMU AFRIKA NENSELELO YOKUNQOBA IBHANDE ELIKHULU
MAGAYE CELE OMUNYE wabashayisibhakela owaziwayo nohlonishwayo kakhulu eNingizimu Afrika usethole impi enkulu kakhulu azoyilwa ngoMarch kuwona lo nyaka. Loyo nguZolani “Last Born” Tete ngokuzalwa ongowaseMdansane, e-Eastern Cape osekuqinisekiswe izindaba zokuthi uzongqimuzana noJason Cunningham wase-United Kingdom (UK) empini enkulu ezobe ibhekwe ngabomvu ngabalandeli besibhakela basezwenikazi i-Afrika kanjalo nasemhlabeni nje jikelele. Kuvela izindaba zokuthi laba bashayisibhakela beqophelo eliphezulu […]